I-Plugin ye-WordPress Engcono Kakhulu
NgeSonto, Septhemba 18, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 9, 2011 Douglas Karr
QAPHELA: Kusukela ngisebenzisa i-MyRepono, ngishintshele ku VaultPress. Kuyabiza kakhulu kepha kudabuka kwi-WordPress (ebhalwe yi-Automattic) futhi ayinazo zonke izingqinamba zephakeji ezenziwa yi-MyRepono.
Bengingenayo i-plugin ye-WordPress eyisipele isikhashana. Ngakho… okokuqala lapho ngi ilahlekelwe i-database yami ye-WordPress kwaba yiphupho elibi! Kube yiphutha lami ... bengikwenza izibuyekezo ezithile ku-database bese ngilahla yonke i-database ngengozi. Bengizibuza ukuthi emhlabeni ngizokuthola kanjani okuthunyelwe yimi kubhulogi ngoba bengingenaso isipele. Bengigula esiswini usuku lonke.
Ngaleso sikhathi, ngangino-a umphathi ohlukile ngubani, ngokubonga, wayene- ukubuyisela okuphuthumayo isici sesayithi. Kwakungukubuyiselwa okubizayo, kungibiza amakhulu amadola, kepha ngangibonga kuze kube phakade ukuthi ngikwazile ukuthola konke kodwa okuthunyelwe kwebhulogi lokugcina kubuyiselwe kungakapheli amahora angama-24. Eminyakeni eminingi kamuva futhi sesishicilele ngaphezu kwama-blog angu-2,775. Leyo yidatha eningi (470Mb). Idatha eningi kakhulu ukufaka nje isipele se-cheapo futhi ulindele ukuthi kusebenze usuku ngalunye ngaphandle kwezinkinga. Ngakho-ke, ngiseshile ngafuna i i-plugin engcono kakhulu ye-WordPress - futhi wakuthola.
Ngazi abantu abambalwa abafake izipele ngqo kuseva yabo yewebhu… lokhu akukusizi lapho umphathi wakho elahlekelwa isiza sakho! Ukwenza isipele i-WordPress mathupha kubuye kube buhlungu ngoba kufanele wenze isipele womabili amafayela ne-database. Abanye abangani bami bawasekele amafayela kodwa bakushaya indiva ukwenza isipele semininingwane… kulapho konke okuqukethwe kwakho kukhona! Udinga i- I-plugin ye-WordPress yokusekelayo okufaka zonke lezi zici - nokuningi.
Sifake futhi sahlola myRepono, isevisi yokwenza isipele enikwe amandla ngamafu. I-myRepono iyisevisi elula ngokweqile, ikukhokhisa nge-bandwidth oyisebenzisayo kunelayisense yesoftware noma imali enkulu ekhokhwa njalo ngenyanga. Kungamasenti ngenyanga ngamasayithi amancane futhi ingaphansi kwamasenti ayi-10 ngesipele ngasinye sesiza sami.
Izici ze-MyRepono zifaka:
Isipele ukufaka okungenamkhawulo kwe-WordPress
Ukwenza isipele kwawo wonke amafayela we-WordPress
Isipele semininingwane ephelele ye-mySQL
Vikela Ukubethela Kwefayela
Amathuluzi Wokubuyisela Ifayela
Ukucindezela Ifayela eliyisipele
Ukuphathwa Kwewebhu - kufinyeleleka kunoma yisiphi isiphequluli, noma kuphi
Abafundi be-blog ye-Marketing Tech bangakwazi bhalisela i-myRepono namuhla ngesixhumanisi sethu sokuxhumana futhi uzothola isikweletu nge $ 5 yakho yokuqala yezipele. Lokho kuhle kakhulu! I-plugin ithathe ngaphansi komzuzu ukuyifaka nokumisa.
Inothi elilodwa - lolu uhlelo oluhle kakhulu lokuthuthela isiza sakho se-WordPress noma ibhulogi futhi!
Sep 19, 2011 ku-7: 06 AM
Kahle kahle! Ngicabanga ukuthi sonke kufanele sifunde kanzima, akunjalo? Kuzwakala kungumbono omuhle.
Sep 20, 2011 ku-8: 07 AM
Vele, ukube ubune-Compendium blog, ngabe ngabe iphephile vele…
Sep 20, 2011 ku-8: 50 AM
Kuyiqiniso, ukuqapha, ukungasebenzi kwemininingwane egciniwe kanye nezipele ezingekho kusayithi kuyizici ezinhle zensizakalo yonke ongayenzi ngokwanele!
Nov 29, 2016 ngo-1: 14 AM
Ngisebenzisa i-BackupGuard ukwenza isipele isiza sami se-WordPress.I-plugin enhle! https://wordpress.org/plugins/backup/